Maxakamadda Gobolka Sanaag Oo Go’aamisay In Dib Loo tiriyo Codka Degmadda Ceerigaabo “Magaca Marxuum Xalay Lagu Toogtay Ceerigaabo Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Xaaladda Magaaladdaasi | Cadceed newssite
Maxakamadda Gobolka Sanaag Oo Go’aamisay In Dib Loo tiriyo Codka Degmadda Ceerigaabo “Magaca Marxuum Xalay Lagu Toogtay Ceerigaabo Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Xaaladda Magaaladdaasi
Dec 5, 2012 Ceerigaabo (Cadceed)-Alla ha u naxariistee Marxuum Bashiir Jaamac Yare ayaa la sheegay in Makhribkii xalay lagu dilay magaalada Ceerigaabo ee kadib markii nin rayid ahi toogtay. Marxuumka oo gacan ku dhiiglahani toogtay salaadii makhrib ee shalay ka dib waxa la sheegay in isla goobtiiba uu ku geeriyooday iyada oo meydkiisa la geeyey cusbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo. Gacan ku dhiiglaha Marxuumkan dilay ayaan ilaa hadda gacanta lagu haynin, balse ciidammada ammaanka ayaa ku raad jooga soo qabashadiisa si sharciga loo horkeeno. Dilkan ayaa la sheegay inuu xaaladda Magaaladda Ceerigaabo wax ka beddelay isla-markaana ay kacsan tahay, iyadda oo la tilmaamay in ninkan loo dilay aanno hore oo ka dhaxaysay labada beelood ee ay ka soo kala jeedaan ka dilay iyo wax ka dilay.
Dhinaca kale Tan iyo markii dorraad galab lagu dhawaaqay natiijada hor dhaca ah ee codbixintii doorashada ee degmadda Ceerigaabo waxa isasoo tarayey kacdoonnada bulshadu arrintaas ka samaynayeen iyo saluugga caddaaladeed ee murashaxiintii tartanku ka dhexeeyey iyo taageerayaashooduba ka muujinayaan Natiijaddan. Waxa xusid mudan natiijada xilligii lagu dhawaaqay oo ahayd goor gaaban oo gabbal-dhac ah ayaa waxa si deg deg ah gudaha magaalada Ceerigaabo uga bilawday kacdoon dadweynaha Ceerigaabo ku tageen Xarunta Komishanka, halkaasoo Rasaas ay isu adeegsadeen dadweynahaas iyo ciidanka ammaanku. Waxa kaloo subaxnimadii shalay iyaguna Badhasaabka gobolka Sanaag kula kulmay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo xubno tiro badan oo murrashaxiintii ururro dhawr ah oo ka cabanaya Natiijadda doorashadan oo ay sheegeen inaanay caddaalad ku salaysnayn. Kuwaas oo kulanka badhasaabka kadib maxkamadda gobolka u gudbiyey dacwado goonni-goonni ah oo ay kaga dalbanayaan in dib loogu tiriyo codka sanaadduuqdaas gudaha ugu jira, Taasoo duhurnimadii shalay sida ku cad qoraal kasoo baxay maxkamadda gobolka Sanaag go’aan ku gaadhay codka gudaha ugu jira sanaaddiiqdaas in dib loo tiriyo si dhinacyada cabanaya loo qanciyo. Waxa kaloo murrashaxiintan iyo mas’uuliyiinta urur-siyaasadeedyada qaarkood saxaafadda ugu soo bandhigeen suuqa Ceerigaabo qaar ka mid ah bugaagtii waraaqaha dadweynuhu ku codaynayeen oo iyagoo aan wax calaamad ah lahayn dusha lagu sito, taasoo sida ay sheegeenna sanaadduuqda bugaagtani ku jirtay cod aan jirin oo la sheegay inuu gudahooda ku jiro lagu kala tirsaday komishanka oo ururrada siyaasadana loo kala qoray. Taasoo ay markhaati uga dhigayaan Natiijaddani inay tahay mid aan caddaalad ku salaysnayn. Halkaasoo murrashaxiintii iyo mas’uuliyiintii goobtaas ku sugnayd qaarkood farriimo cad cad u gudbiyeen saxaafadda uguna baaqeen hay’adaha sharciga iyo komishanku in ay wax ka qabtaan Natiijaddaas xaaraanta ah. Waxa sidoo kale iyaguna jira shakhsiyaad gacanta ku haya bugaagta xaashiyaha codayntu ka dhammaadaan qaybtooda danbe oo ay tahay marka sanduuqa la xidhayo in gudaha loogu rido si loo ogaado tirada xaashiyaha iyo bugaagta goobtaas lagu isticmaalay.